Marvel wuxuu shaaca ka qaaday sida masiirka naxdinta leh ee Iron Man looga go’aansaday 'Avengers: Endgame' - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Marvel wuxuu shaaca ka qaaday sida masiirka naxdinta leh ee Iron Man looga go’aansaday 'Avengers: Endgame' - BGR
Haa, Tony Stark aka Iron Man ayaa ku dhintay Rakaabka: Dhamaan oo lagu calaamadeeyay mid ka mid ah daqiiqadihii ugu xumaa ee filimka oo dhan. Tani waa inaysan sii ahaan doonin qaswadayaal marka loo eego daawadayaasha aadka u badan ee filimka ay lahaayeen wax ka badan seddex bilood tan iyo markii la sii daayay tiyaatarada. Hadda taas Endgame waxaa lagu heli karaa qaab digital ah oo aan baranay xitaa qarsoodi badan oo ku saabsan filimka de faallo ahaan taas oo ay weheliso nooca loo yaqaan 'Blu-ray', iyo sidoo kale wareysiyo kale oo lala yeeshay kuwa ka shaqeeya shirkadda Marvel. Hadana, waxaan ognahay sida saxda iyo goorta masiibada naxdinta leh ee Iron Man go’aansatay.
Waxaan galaynaa dagaalka ah ee midnimada iyo gaar ahaan Endgame waxaan ka tuhunnay geerida qaar ka mid ah geesiyaasheena aan jecel nahay. in dhimashadani ay noqon doonaan kuwa joogto ah. Tony Stark iyo Steve Rogers ayaa ka mid ahaa musharixiinta ugu sareysa, iyadoo la siiyay taariikhdooda iyo ahmiyadooda kooxda. Hogaamiyaasha Rakaabka waxay soo bandhigeen qabqabyo cajiib ah muddadan aadka u weyn Xagga midigta labadooduba waxay ku guuleysteen sii deyntooda MCU. Hadda taas Endgame waa la soo dhaafay waxaanan eegaynaa wajiga xiga ee dhacdooyinka MCU, waxaan ognahay in labada geesiyaal ay howlgab noqdeen. Midkood ayaa dhintay kan kalena waa inuu hawlgab ka dhigaa oo uu ku noolaadaa nolol aad u faraxsan.
La hadlaya ka joornaal joornaal Empire ku saabsan ee Endgame Madaxweynaha Marvel Kevin Feige ayaa shaaca ka qaaday in dhimashadii Iron Man la go’aamiyay. dib u bilow bishii Diseembar 2015, isla markiiba Captain America: Dagaalkii Sokeeye . Qorshaynta labada filim ee ugu dambeeyay Avengers bilaabay shan sano ka hor, inta lagu guda jiro dib u gurasho halkaas oo dhowr fuliyayaal Marvel la kulmay si ay u go'aamiyaan mustaqbalka shaqo-u-helidda:
Waxaan joognay dib u gurashodeena saddexaad, laga yaabee shan sano ama in ka badan. Waxaa jira waxyaabo badan oo dheeri ah, markii aan bilownay ka hadalka waxa noqon doona Dagaalkii Infinity et Endgame . Iyo gaar ahaan, sida loo bixiyo casaankan guduudan ee Joss [Whedon] uu dhigay dhamaadka Avengers oo uu bilaabo inuu dhexgalo wadamadan cajiibka ah ee 'Infinity Stones' oo aan haysanno oo keenaya macjuffins cajiib ah dhammaan filimadan shaqsiyadeed. Markaad meel isugu keento, waxaan u maleyn jirnay inay intaas ka badnaan karto. Oo waxay ahayd intii lagu jiray baxsashadaan waxaan u maleyneynay inaan sameyno laba filim isku mar, taas oo leh faa'iidooyinkeeda iyo faa'iido darrooyinkeeda.
Waxaa soo baxday in Marvel uu ku dhiiraday ka bixitaanka Tony ee guryahiisa kale, oo uusan xakamayn waqtigaas. tani waa X-Men iyo gaar ahaan, Logan :
Waxaan aragnay Logan sida dadwaynuhu sameeyeen, masrax aan wax shaqo ah ku lahayn sameynta filimkan oo aaday, 'Oh ilaahayow, maxaa cajiib ah oo ku dhammaaday Hugh qof ahaan. Waxaana jira tusaalooyin dhowr ah oo jilaa sidoo kale xiriir la leh dabeecad uu si fiican u soo bixi karo. iyo Logan waa kan keliya ee maskaxda ku soo dhaca, xilligan la joogo, kuwo badan ma jiraan. Taasina waa waxa aan rabnay inaan siino Robert, taasna waxay ahayd bartilmaameedka shaqadeenna.
Marvel runtii waxay dooneysay dhamaadka filimka inuu saameyn yeesho, mana jiro dariiqa kafiican ee wax looga qaban karro musiibada:
Nick Fury waa la tooganayaa wuuna ku dhintaa Askar Jiilaal iyo dib ugu noqo ficilkii saddexaad, kaas oo ahaa mid weyn, laakiin ma ahan geeri. Dadkuna waxay dalbanayeen, daruuri maahan geeri, laakiin waa dhir iyo shucuur run ah. Aniguna waxaan xasuustaa fikirka, "Feejignow waxa aad rabto," sida aan ugu sii dhowaanno taas. Laakiin weligeen wax kama weydiin isaga. Dhamaan walwalka iyo dhamaan dadaalada ayaa la sameeyay si dhulka looga dhigo mid qiimo leh.
Marka laga hadlayo Robert Downey Jr., jilaha wuxuu ogaa tan iyo bishii Diseembar 2015 inuu Tony dhiman doono:
Waxaan xasuustaa tuurida Robert Downey Jr. malaha bisha Diseembar 2015, waxaan u maleynayaa. Waxaan u keenay fikradda ah labada qaybood ee finalka Avengers et Spider-Man: Hoyashada taas oo qayb ka ahayd. Waqti yar ayay qaadatay, laakiin ugu dambeyntii wax walba way shaqeeyeen. Waxaan u maleynayaa bilowga, uma muuqato in safarkan uu dhammaaday. Laakiin markii filimku soo dhowaaday, runtiina waxay u dhaqaaqaysay dhammaanteen, gaar ahaanna isaga.
Isha Isha: Marvel Studios
Aktarada "Game of carshiga" waxay cadeyneysaa in xilligii 8 uu ahaa khayaano - BGR
Le prince de Galles félicite le pape François pour son “grand succès” dans la bataille pour l'environnement – VIDEO